Sheekh Shariif oo Madaxda dowladda ugu baaqay in aan la siyaasadeyn Coronavirus - Jowhar Somali Leader
Home Somali Sheekh Shariif oo Madaxda dowladda ugu baaqay in aan la siyaasadeyn Coronavirus
Sheekh Shariif oo Madaxda dowladda ugu baaqay in aan la siyaasadeyn Coronavirus
Madaxweynihii ku meelgaarki hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa ugu baaqay Madaxda dowladda in aanay siyaasadeyn cudurka Coronavirus, oo si wadajir ah looga hortago.
Sheekh Shariif oo xalay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in cudurkan si midnimo leh ay dadka Soomaaliyeed uga hortagaan, waxaana uu ugu baaqay dowladda Federaalka inay wada shaqeyn la sameyso Maamul goboleedyada, loona midoobo in si wadajir ah cudurkan looga hortago.
“Waxyaabaha aan rabno in dowladda inay sameyso oo aan kula talineyno waxaa ka mid ah wada shaqeyn inay la sameeyaan dowlad goboleedyada oo loo midoobo, maxaa yeelay arrintan siyaasad ma ahan, waa bani’aadanimo waa arrin khuseyso qof kasta Soomaali ah, marka in aan la siyaasadeyn oo siyaasad laga saaro, waxay abuuri kartaa fursad dadka Soomaaliyeed ku midoobaan oo ay uga gudbi karaan waxyaabo badan oo caqabado dhexdood ah, waa qadiyad umadda soomaaliyeed taabaneysa”ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sheekh Shariif ayaa sidoo kale ugu baaqay Beesha Caalamka in qaataan kaalintooda ku aadan sidii cudurkan looga hortagi lahaa oo agabkii loo baahnaa ee ka hortaga iyo daaweynta cudurka ay dalka soo gaarsiiyaan, lana helo dhaqaale lagu cawiyo xaalada adag ee ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inuu kordhay tirada dadka uu soo ritay cudurka Coronavirus, waxaana uu gaaray illaa 60 ruux, kaddib markii shalay wasaaradda Caafimaadka ay shaacisay in 35 qof oo cusub laga helay.
Toban kun oo ruux oo lagu xirxiray banaanbaxyadii ka dhacay Maraykanka